Vänersborg | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Västra Götalands län / Vänersborg
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 14 11 2019
Degmada Vänerberg waa caasimada gobolka Västra Götaland, waxeeynta ku ag taala afka koonfurred ee Vänern. Dadka dhawaan usoo guuray waxeey ka helaan uu dhawnaanshaha dabiicada iyo biyaha. Vänesberg, heesaha, dhaqanka iyo isboortiga door hore ayaa ka ciyaaraan.
644 kiilomitir oo laba jibaaran
Trollhättan 16 kiilomitir
Uddevalla 31 kiilomitir
Göteborg 89 kiilomitir
Oslo 248 kiilomitir
Degmada waxeey lee dahay afar xaafado oo dhismo isku dhow leh; Vänersborg iyo Brålanda, Frändefors iyo Vargön. Degmada Vänersborg aragtideeda mustaqbaleed – soo jiidasho iyo waarida dhanka kasto ah, nolasho oo dhan.
AB Vänersborgsbostäer waa shirkada guriyaasha ee ugu weeyn Vänersborg, waxaana leh degmada Vänersborg.
AB Vänersborgsbostäder Liistada guri-kireeyayaasha iyo guri-iibiyayaasha
Koox-luuqadeedka weeyn waa af carabi, af soomaali, af tigrinya iyo af romani.
Vänersborg waxeey caan ku tahay in ee tahay degmo leh ururo badan oo kala duwan. Ka raadso diiwaankeena-urureed, kana hel mid adiga kuu haboon.
Bartamaha Vänersborg waxaa ku yaalo xafiis adeeg oo ee ku dhexyaaliin Qasnada ceeymiska, Xafiiska canshuuraha iyo hey'adda hawlgabka. Isla sarta waxaa ku yaalo xafiiska shaqada. Qeeybta qaxootiga ee degmada waxeey ku taala qeeybta xanaanda qofka iyo reerka. Vänersborg waxaa ku yaalo dukaamo badan oo gacan labaad iibiyo. Bartamaha waxaa ku yaalo dukaamo cunto, maktabad, farmahiye, banki iyo maqaayado, maqaayada gado bitsada iyo biibito.
Vänersborg waxaa ku yaalo 27 dugsiyaal xanaano ee degmada le dahay iyo 5 madaxbanaan. Dugsiyada hoose waxeey lee yihiin guriga xilliga firaaqada. Xarunta reerka Sirius waxaa ka mid ah oo ku yaalo xanaanda furan.
Akhri dheeraad ku saabsan xanaanada caruurta iyo dugsiyada xanaanada ee degmadan.
Dugsiyada xanaanada iyo xanaanada caruurta ee degmadan Dugsiga xanaanada ee furan
17 dugsiyaal hoose waxeey lee yihiin ku dhawaad 3 500 oo arday. Sido kale waxaa jiro labo dugsiyaal oo madaxbanaan; Iskuulka-Frida iyo Vänersnäs montessori. Ardayda dhagaha la' ama maqalka-ku yaryahay waxaa uu jiro iskuulka dowlada ee Väners.
Dugsi sare ee Birger Sjöberg waxuu ka mid yahay ururka-aqoonta Väst oo masu'ul ka aha waxbarahada dugsiga sare iyo dadka waa weeyn ee gudaha Vänersborg iyo Trollhättan.
Halkaan waxaa lagu qabtaa barashada-bulshada ee loogu tala dadka dalka ku cusub. Ururka-aqoonta Väst ayaa ka masu'ul ah barashada iswiidhishka ee loogu tala galay ajnabiga. Magaalada dariska ee Trollhättan waxeey ku taala Jaamacada Väst.
Waxaa jiro 5 rug caafimaad oo ku taalo degmada Vänersborg. Waxaad dooran kartaa midka aad rabto, in dheeraad ah oo ku saabsan doorashada caafimaadka akhriso. Markasto waxaad wici kartaa 1177 si aad uu hesho talo-caafimaad.
Isbitaalka Näl waxuu ku yaala Trollhättan, waxuuna 10 kilomitir uu jiraa Vänbersborg. Isbitaalka Uddevala waxuu jiraa 30 kilmomitir. Isbitaalada waa wada shaqeeyaan waxeeynta ka tirsan yihiin Daryeelka-bukaanka-NU.
Waxaad xaq uu lee dahay turjumaan markii aad xariir la yeelaneyso hey'addaha kala duwan. Hey'addaha ayaa habeeyaanaayo turjumaan, qarashkiisna dhiibaayo. Turjumaanada waxeey lee yihiin sir xafidid.
Trollhättan-Vänersborg si toos ah ayaa uga duuli kartaa adigoo ku tagaayo Bromma ee magaalada Stockholm. Jidadka-qaranka 42, 44 iyo jidka yurub 45 ayaa degmada maro. 50 daqiiqo ayaa tareen lagu tagaa Göteborg. Xilliyada baska iyo tareenka waxaad ka heleeysaa Västtrafik.
Shaqo dhiibaha ugu weeyn ee madaxabanaan waa VBG Group AB, Tranter iyo Norautron AB. Bogga degmada Vänersborg ayaad ka heleeysaa warbixin dheeraad ah oo ku saabsan shaqo iyo shirkadeeyn.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Vänersborg